Kedụ ụzọ Ndị A Ga - esi Mee Ka Mmekọrịta Oria Ọrịa ogbu na nkwonkwo sie ike? | Ọkọwa Okwu Ahụike
2 Tozọ iji Mee Mmekọrịta na RA
3 Usoro iji wusie mmekọrịta dị na ọrịa ogbu na nkwonkwo ike
4 Iwulite Mmekọrịta na Ọrịa ogbu na nkwonkwo
5 Otu esi eme ka mmekọrịta dịkwuo ike mgbe RA na-eme Nkebi:
Tozọ iji Mee Mmekọrịta na RA
Ayszọ iji Mee Mmekọrịta na RA bụ post site na: Rheumatoid Ọrịa ogbu na nkwonkwo
Usoro iji wusie mmekọrịta dị na ọrịa ogbu na nkwonkwo ike
N'ime afọ iri gara aga, ndị na-agụ akwụkwọ kwuru ihe ma zitere m ozi ọtụtụ oge gbasara mmekọrịta ha na ọrịa ogbu na nkwonkwo. Mmekọrịta a na ndị ọzọ dị mkpa yana ndị ọzọ na ezinaụlọ, yana ọbụbụenyi nwere ike imebi ihe nsonaazụ RA.
Anyị ekwuola ọtụtụ mgbe banyere otú ndị ọzọ si enwe nsogbu ịghọta mgbaàmà ndị a na-adịghị ahụ anya nke ọrịa rheumatoid. Ọnụ ọgụgụ ịgba alụkwaghịm dị elu na RA na ọrịa ahụ nwekwara ike nwalee mmekọrịta ndị ọzọ.
Nchọpụta nke RA nwere ike ịgbakwunye nrụgide na akụkụ ndị dị mkpa dịka nhazi oge, ọrụ na ego nke nwere ike imetụta mmekọrịta.
Healthgrades gwara m ka m dee usoro maka ndị nwere RA iji mee ka mmekọrịta dị ike. Amaara m na ndị na-agụ akwụkwọ ga-enwe obi ụtọ na ederede dị nkenke banyere ụzọ iji hụ na mmekọrịta maka ndị bi na RD siri ike dịka o kwere mee.
Iwulite Mmekọrịta na Ọrịa ogbu na nkwonkwo
Arthritis Rheumatoid (RA) na mmekọrịta abụghị ihe mbụ mmadụ na-amụta banyere ijikwa ọrịa ahụ. Mana ibi ọrịa na-egbu mgbu dịka RA na-etinye mgbakwunye na mmekọrịta gị. Kemgbe ọtụtụ afọ, ahụla m otú RA si eme ka mmadụ ghara ịbụkwa ndị enyi ma ọ bụ ịlụ di ma ọ bụ nwunye. Ọnụ ọgụgụ ịgba alụkwaghịm dị elu na RA.
Aghọtakwala m ọtụtụ alụmdi na nwunye na-akwụsi ike site na njikwa RA. Kedu ụdị ihe ndị mmadụ na-eme iji mee ka mmekọrịta ha sikwuo ike mgbe ha na RA bi?
Otu esi eme ka mmekọrịta dịkwuo ike mgbe RA na-eme Nkebi:
1. Kpọrọ onye gị na ya gaa na oge nlekọta ahụike, dịka ọgwụgwọ infusion. Nke a bụ ohere iji hụ ma mụtakwuo banyere ọrịa ahụ ma nwee ekele maka na ọ bụghị ihe dị gị n'isi.
2. Kekọrịta njikọta blọgụ ma ọ bụ ibe mgbasa ozi mgbasa ozi ebe ị na-ahụ nkwado. Ha ga-amụta site na ịnụ site na ndị ọzọ nwere ahụmịhe yiri nke gị.
pịa ebe a gụọ akwụkwọ edemede ahụike na Healthgrades.
Ayszọ iji Mee Mmekọrịta na RA nwebiisinka sitere na: Rheumatoid Ọrịa ogbu na nkwonkwo nke Kelly Young, RA Pati Insights, LLC.
* Isi mmalite
Kedu ndụmọdụ 10 dị mfe kachasị mma maka Ọrịa Arthritis mgbu Relief?
Ogbako maka Cutibacterium na nyocha ịwa ahụ
Hydroxychloroquine eji: Eziokwu 10
Eziokwu: Ọrịa Coronavirus & Autoimmune
Ihe na ogbu na nkwonkwo, ogbu na nkwonkwo mgbu, Ọrịa ogbu na nkwonkwo, Arthritis Rheumatoidakpado ogbu na nkwonkwo, ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo, ọrịa ogbu na nkwonkwo nke ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa ogbu na nkwonkwo nke rheumatoid, Nkọwapụta ogbu ogbu na nkwonkwo, ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo, nri ogbu ogbu na nkwonkwo, dọkịta ogbu na nkwonkwo, ọgwụ ogbu na nkwonkwo, Ihe nrịba ama ogbu na nkwonkwo, Rheumatoid ogbu na nkwonkwo ụkwụ, Mkpịsị aka ogbu na nkwonkwo, aka ogbu na nkwonkwo aka, ọrịa ogbu na nkwonkwo ụkwụ, ọrịa ogbu na nkwonkwo n'aka, ọrịa ogbu na nkwonkwo na ikpere, ogbu ogbu na nkwonkwo bu oria a na-ebute oria, ọrịa ogbu na nkwonkwo nke rheumatoid, ikpere ogbu na nkwonkwo nke ikpere, ọgwụ ogbu na nkwonkwo nke rheumatoid, ọrịa ogbu na nkwonkwo nke rheumatoid, ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo, ọgwụgwọ ogbu na nkwonkwo nke rheumatoid
Mee 16, 16 Ihe Nleta Hometụnanya nke Ahụ Maka Ọrịa Na-eto Eto Na-eto Eto…
Ọrịa obi, nkụchi obi, ọrịa strok: Ọrịa obi ọjọọ nke COVID-19